Shiinaha shixnadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha saacadda birta ah ee Shiinaha | Shengrui
Naqshad Islaami ah / Ayatul Kursi / nashqadeyn darbiga muslimka ah.
Naqshad: Naqshad Islaami ah / Ayatul Kursi / nashqad qurxin derbiga muslimiinta ah.
Cabbirka: 49cm x 49cm / 60 x 60cm / cabbirka la habeeyay
Waxyaabaha: bir culus / bir bir ah.
Baakadaha: Baakadka: 1pc / sanduuqa bunni. 6pcs / kartoon.
Dhamee: Budada dahaarka leh ee matte madow, qalin burush ama dahab rinji.
Stylish & Functional: Qeybta qoraalka quruxda badan ee qaabka iyo sida saacadda derbiga madow u eg. Xalka weyn ee booska madhan ee madhan sida kelidii ama lahjadda derbiga lahjadda. Qurxinta badankood waxay ku habboon tahay hadday tahay mid casri ah, dhul beereed dalka ah, Vintage retro, iwm. U isticmaal jikada, cuntada, qolka jiifka, qolka jiifka, wadiiqada, baararka, makhaayadda, kafeega, saacadda dukaanka, saacadda musqusha, saacadda gidaarka xafiiska, iyo in ka badan.
Si fudud loo sudho: Wuxuu imanayaa si buuxda la iskugu keenay.
Si fudud u lalmid darbiga adoo isticmaalaya qaabka wareega wareega ee halbowlaha oo kuyaala dhabarka dhexe (HAYBARKA KU JIR
Badeecadani waxaa lagu sameeyaa goynta laser saxda ah oo leh faahfaahin aad u fiican.
Waxaan 100% kormeernaa alaabada si aan u hubino tayada ugu sareysa.
Hore: Geedka nolosha Buug-gacmeedka biraha
Xiga: Farshaxanka gidaarka birta Islaamka